Makunivhesiti epamusoro gumi epamusoro muQatar kune Vadzidzi Vepasi Pese | Mari yechikoro & Ruzivo 10
Kudzidza Kunze Kwenyika Gwara
Makunivhesiti epamusoro gumi epamusoro muQatar kune Vadzidzi Vepasi Pese | Mari yechikoro & Details
Dai 19, 2022 Daniel Okeke
Wanga uchiziva here kuti mazhinji emayunivhesiti eQatar evadzidzi vepasirese anovakwa nepamusoro maYunivhesiti epasirese kubva kune dzine mukurumbira nyika pasirese? Ndiri kutaura nezvenyika dzakaita seUnited States neUnited Kingdom.
Saizvozvo, Kuwait University ndiyo chete yunivhesiti yehurumende munyika. Uye, pane a zvishoma zvinobatsira izvo zvinouya nekudzidza kune dzimwe nyika, kusanganisira kusangana nevanhu vatsva kunze kwerudzi rwako, uye tsika, uye kugona nharaunda itsva.
Qatar inzvimbo inogamuchira tsika dzakawanda, dzinza, uye mamiriro, uye mazhinji emakirasi avo ari muChirungu (haufanire kunetseka kana chiri vose-vanotaura chiArabic nyika). Zvakare, kudzidza muQatar kunouya nezvakawanda zvezviitiko, iwe unozoratidzwa kune yakanaka uye inoyevedza nzvimbo, zvinoshamisa zvivakwa, uye inoshamisira yerenje nharaunda.
Inyika ine akati wandei epamusoro mayunivhesiti, uye vane guta rinozivikanwa se “Dzidzo Yedzidzo” kwaunowana mazhinji emayunivhesiti aya muQatar kune vadzidzi vepasirese. Inyika yakanaka kutanga basa rako rekuyunivhesiti zvakafanana Nyuzirendi, imwe nyika inogamuchira noushamwari vadzidzi vemarudzi ose.
Pamusoro pezvo, dzimwe nyika dzinogamuchira vadzidzi vepasirese uye zvakare dzinopa nzvimbo yekuti vatore muzvidzidzo zvavo zvepasirese, nyika dzakadai, Kanadha uye United States vhura gonhi rakafara renyika dzese. Zvakare ivo vanopa akawanda mabhezari kune ava vadzidzi vepasirese.
Tisati tanyura takananga mumayunivhesiti epamusoro eQatar evadzidzi vepasi rese, ngatidzidzei zvimwe zvaunoda iwe usati wagamuchirwa kumakoreji aya.
Zvinodiwa kuti udzidze muQatar semudzidzi wepasirese
Mutengo wekufunda muQatar kune vadzidzi vepasirese
Scholarships muQatar yevadzidzi vemarudzi ose
Makunivhesiti muQatar kune Vadzidzi Vepasi Pese
2. Weill Cornell Mushonga - Qatar
3. Georgetown University muQatar
4. Texas A&M University kuQatar
5. HAMAD BIN KHALIFA UNIVERSITY (HBKU)
6. Carnegie Mellon University Qatar
7. Doha Institute for Graduate Studies (Dhigirii raTenzi)
8. Virginia Commonwealth University School of the Arts muQatar
9. Northwestern University muQatar
Mayunivhesiti muQatar eVadzidzi Venyika Dzese - FAQs
Yunivhesiti muQatar inodhura here?
Ndinogona here kuwana kudzidza muQatar?
Qatar inzvimbo yakanaka yekufunda?
Zvinodiwa kuti udzidze muQatar semudzidzi wepasi rese hazvina kunyanya kusiyana nezvinodiwa nedzimwe nyika dzepamusoro. Hezvinoi zvinodikanwa zveBachelor's, master's, neP.D. madhigirii ekudzidza muQatar.
Kupedzwa kwemakore gumi nemaviri edzidzo yepamutemo nemhedzisiro yakasimbiswa.
Minimum CGPA ye2.0 pachiyero che4.0 kana "C" yakaenzana.
Vakapasa zvidzidzo zvitanhatu zvakasiyana, kusanganisira imwe sainzi (fizikisi, chemistry, kana biology)
Kune dhigirii resainzi, munhu anofanira kupasa zvingangoita zviviri zvidzidzo zvesainzi, uye 2 masvomhu ane inokwana 1 GPA kana "C" yakaenzana.
SAT Kurangarira Muedzo kana ACT inodiwa.
TOEFL kana IELTS inogona kudiwa.
Kuendeswa kweChirevo Chako
Mavara maviri ereferensi, akanyorwa neChirungu.
Dhigirii reBachelor kana repamusoro rakagamuchirwa necumulative GPA yeinenge 2.8 (izvi zvinogona kuchinja zvichienderana neyunivhesiti)
Iwe unozofanirwa kugutsa zvimwe zvirongwa zvekubvumidzwa zvinodiwa. Ndokunge, chirongwa chauri kuda kupa uye koreji inozoona zvimwe zvinodiwa.
Dhigirii raTenzi kana repamusoro rakagamuchirwa necumulative GPA yeinenge 3.0. (inogonawo kuchinja zvichienderana neyunivhesiti).
Zvibodzwa zvebvunzo zvakamisikidzwa (semuenzaniso GRE, GMAT) zvichadikanwa kune vese Ph.D. zvirongwa zvinopihwa muChirungu.
Zvimwe zvinodiwa kubva kune chaiyo koreji/chirongwa.
Iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo zvishoma zvinodikanwa kumayunivhesiti eQatar kune vadzidzi vepasirese vatinoda.
Iye zvino ngatidzidzei kuti ingaite marii kuti udzidze muQatar semudzidzi wepasi rese.
Chokwadi ndechekuti, hapana mutsauko pakati pezvinozobhadharwa nemudzidzi wepasi rese kana zvichienzaniswa neaizobhadhara mudzidzi. Dzidzo uye mubhadharo zvakada kufanana, uye zvakafanana mumayunivhesiti mazhinji epasi rese muQatar.
Avhareji yemari yechikoro muQatar yevadzidzi vepasirese inobhadharisa $20,000 kana QAR 72,820. Mamwe mayunivhesiti anotarisawo pamaawa echikwereti, uye avhareji yechikoro cheawa imwe yechikwereti imadhora mazana maviri nemakumi manomwe kana QAR 1 uye iwe unofanirwa kupedzisa gumi nemaviri maawa echikwereti pamesita.
Kuona mutengo wemari yechikoro yekufunda muQatar, zvingave zvisingadhure kune vamwe vanoshuvira vadzidzi vepasirese, kunyanya vadzidzi vanobva kunyika dzinotambira mari shoma. Saka ese mayunivhesiti eQatar evadzidzi vepasi rese vatakanyora vanopa mabhezari.
Kupfuurirazve, kana iwe usingakodzere kune yavo merit-based scholarships, mamwe emayunivhesiti aya anopawo anodiwa-based grants. Chikamu chakanaka ndechekuti, isu takawedzera zvinongedzo kuti utarise zviri nyore izvi zvidzidzo kunze kweHBKU neCUC Ulster University Qatar.
Qatar University haingori imwe yemayunivhesiti akanakisa muQatar yevadzidzi vepasirese zvakare ndeimwe yeakanakisa muEast Asia, uye iri kusunda nesimba kuti ive imwe yeakanakisa pasirese. Kufambira mberi kwavo kwabva 490 positions muna 2016 kusvika 224 positions muna 2022 mu (QS) World University Chinzvimbo.
QU ndiyo pakukura uye vakwegura yunivhesiti muQatar, yavo yeruzhinji institution ndeye anonyatsozivikanwa uye anoremekedzwa nekugona kwayo kupa yekutanga-kirasi mikana kuvadzidzi vayo vekunze. Nevadzidzi vavo vepasirese vangangoita zviuru zvisere munyika dzinosvika makumi masere neshanu, uri kuyunivhesiti yakazara netsika dzakasiyana, uye dzinza, uye une chokwadi chekuona vanhu vanobva kunyika yako.
QU ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasi rese iyo yakaita shuwa kuti zvirongwa zvayo uye makosi anosangana nemvumo yepasirese. Zvakare, QU haisi kure neDoha, Qatar's Capital City, ingori makiromita makumi maviri nematanhatu kubva pairi.
Kunyanya kukosha, QU inotsigira akawanda emabhezari, uko vanosvika mazana mana vanogamuchira vanopihwa bhezari gore rega rega redzidzo.
Mari yavo yechikoro inosiyana zvichienderana nekosi yekudzidza yauri kutsvaga, tinya pano kuti vadzidze zvakawanda nezve mari yavo yechikoro.
Yunivhesiti huru uye yekare muQatar
Vanosvika zviuru zvisere vadzidzi vekune dzimwe nyika pamusasa
Dzinenge 85 nyika dzakasiyana
Scholarships inopiwa kune vanenge 400 vanogamuchira
Kupfuura 28,000 Alumni
Inotenderwa nemasangano anotungamira epasirese
26 km kubva kuDoha
Shanyira Webhusaiti Yechikoro!
Weill Cornell Medicine muQatar ndiyo yekutanga American Medical School yakavakwa kunze kweUnited States uye ndiyo imwe yemayunivhesiti akanakisa muQatar yevadzidzi vepasirese. Inotungamira mudzidzo yekurapa, biomedical research, uye tsvagiridzo yehuwandu muMiddle East.
Yakatangwa muQatar muna 2001 kuburikidza nemubatanidzwa pakati peCornell University neQatar Foundation, uye muna Mbudzi 2014 Weill Cornell akaita danho rakakura. Vakabatanidza zvirongwa zvavo zvedzidzo muchirongwa chikuru chekurapa chemakore matanhatu.
Saka, chikoro ikozvino chakanyanya kutarisa kune vadzidzi vekurapa izvo zvinoita kuti zviwedzere -vavarira. Parizvino, kana uchinge wabvumirwa kuyunivhesiti, haufanirwe kubvumidzwa kechipiri zvakare, sezvazvaive 2014 isati yasvika.
Izvi zvinoita kuti vadzidzi vavo varambe vakatarisa pazvidzidzo zvavo. Zvakare, kana wakapedza pre-medical training kune imwe koreji, unogamuchirwa kunyorera WCM-Q 4-Year chirongwa chekurapa.
WCM-Q ndeimwe yemayunivhesiti mashoma muQatar yevadzidzi vepasirese vakagadzira zvinoshamisa vadzidzi vakaenda kumberi kuti vaite chirongwa chekugara mumayunivhesiti ane mukurumbira seMassachusetts General Hospital. New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, uye Johns Hopkins Hospital.
Mari dzavo dzeTuition dzakafanana neWeill Cornell Medical College muNew York City, uye ingangoita madhora makumi matanhatu nemazana mashanu nemazana mashanu, uye mari yavo yekunyorera i$64,500.
yekutanga American Medical School yakavakwa kunze kweUnited States
Shanyira Chikoro Webhusaiti
Iyi ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasirese uko kwakasiyana tsika nezvitendero zvinogamuchirwa neushamwari. Yunivhesiti iyi yakanyora 633 Bachelor of Science in Foreign Service (BSFS) vakapedza kudzidza munyika makumi mashanu nembiri, uye vakaenderera mberi kuve vashandi vakatanhamara mune zvematongerwo enyika, zvemari, hunyanzvi, dzidzo, kubvunzana nedzimwe nyika, nezvimwe.
GU-Q yaenda mberi kudzidzisa vadzidzi vayo kuti vakwanise kuita uye kugadzira mhinduro huru kune mamwe matambudziko epasirese. Zvakare, ivo vakarera inofarira nharaunda yekudzidza yevadzidzi, iyo inobatsira vese vadzidzi vekugara uye vadzidzi vekunze kuti vadyidzane pasina kurerekera.
GU-Q ndeimwe yemayunivhesiti akanakisa muQatar yevadzidzi vepasirese vanotanga nzendo dzetsika, uko vadzidzi vanoenda kunzvimbo dzavari kudzidza tsika dzavo uye kuzvionera zvinhu. Kunze kwemakirasi, iwe unogona zvakare kuita akati wandei senge makirabhu emagariro, mitambo kana kunyange kuita shamwari dzekunze, uye unogona kufamba uchitenderedza zvimwe zvikoro mumakwikwi.
Mari yechikoro yekudzidza muGU-Q ndeye $59,784. Uye inowedzera ne6% gore rega rega, tinya pano kuti uwane rumwe ruzivo nezve mari yavo yechikoro.
Offers scholarship uye rubatsiro
Anotanga nzendo dzetsika kune dzimwe nyika
633 (BSFS) vakapedza kudzidza munyika makumi mashanu nembiri
Shanyira Webhusaiti Yechikoro
Vashandi vanogara vachishanduka, uye Texas A&M ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasi rese vari kudzidzisa vadzidzi vavo kuti vajairane neshanduko iyi. Iwe wakadzidziswa kuyunivhesiti kutsungirira chero nzvimbo yebasa, mune chero mamiriro.
Ndiko kusaka vadzidzi vavo vazhinji vakapedza zvidzidzo zvavo kuita vatungamiri vakuru mumakambani akasiyana, vamwe vacho vakaenderera mberi nekutanga makambani avo. Yunivhesiti inoparidza uye maitiro ekuvaka hukama hwakasimba nevamwe vaunodzidza navo, iwe uchadyidzana uye kushanda nevadzidzi vakasiyana vanobva kwakasiyana kwakasiyana.
Mari yechikoro inosiyana, tinya pano kuti udzidze zvakawanda
Offers scholarships uye mari yekubatsira
Vadzidzi vavo, fakaroti, uye vashandi, vane mukurumbira kunzi Aggie.
HBKU ndeimwe yetsvakiridzo yemumba uye vakapedza kudzidza vanodzidza mayunivhesiti, izvo zviri kubatsira kushandura Qatar uye zvakare kuve nemhedzisiro yepasirese. Iyi ndeimwe yemayunivhesiti mashoma muQatar yevadzidzi vepasirese inoita zvakawanda zvakawanikwa muminda yakawanda kudaro.
Pane chitendero chakafanana, (kuita zvakanaka kuburikidza nekudzidza kwepamusoro mukusimudzira nyika) zvakagovaniswa pakati pevadzidzi vavo, fakaroti, vashandi, vadyidzani, uye vatungamiriri. Kune vadzidzi vepasirese vanobva kunopfuura 60 nyika dzakasiyana.
Zvakare, Computer Engineering ndiyo yega bachelor's degree chirongwa chinopihwa kuHBKU.
Mari yavo yechikoro inosiyana nemakoreji avo uye chirongwa chauri kupa. Click pano kuti udzidze zvakawanda nezve HBKU's tuition fee.
66% yevadzidzi vepasirese
CMU-Q ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasirese uko vadzidzi vavo vakatanhamara munzvimbo dzakawanda, kusanganisira nguva pfupi yadarika kuhwina mukwikwidzi wenyika weArabic gakava. CMU-Q yakavambwa muQatar muna 2004 nerubatsiro rweQatar Foundation.
Panguva yekutanga kwayo, vadzidzi makumi mana nevamwechete vaivepo, asi ikozvino, vane vadzidzi vakasiyana munyika dzinopfuura makumi matatu neshanu. Chinonyanya kukosha, ivo yakatora 28th uye 48th yunivhesiti yepamusoro munyika yose neYunivhesiti Rankings uye QS World University Rankings zvichiteerana..
CMU-Q yakagadzirwa nenzira iyo vadzidzi vavo vanogona kurarama a cherechedza-yakakodzera hupenyu huri kunze kwekirasi, vanokurudzirwa kufamba-famba kuti vadzidze, nekuvandudza kwavo hunyanzvi hweutungamiri, inodiwa pabasa ravo.
Kupfuurirazve, CMU-Q imwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasirese iyo inobatsira vadzidzi vavo kuvaka hunyanzvi hwavo hwekutaurirana, uye savvy yesangano, izvo zvinovabatsira kuisa zvavanoziva kushanda. Unogona kusarudza kuronga kirabhu yagara iripo yevadzidzi, kana kutotungamira imwe nyowani.
Dzidzo paCMU-Q yakafanana nePittsburgh Campus muUnited States. Mari yavo yepagore yechikoro i$57,560 (QAR 210,094) uye imwe mari inofanirwa kubhadharwa pamwe chete nemari yechikoro, semubhadharo wekuita, tekinoroji, mabhuku, uye inishuwarenzi yehutano.
Pamusoro pezvo, kune rubatsiro rwemari senge merit-based Scholarship uye inodiwa-yakavakirwa grants iwe yaunogona kunyorera, uye inowanikwa kune chero nyika.
Offers Scholarships & Grants
Vadzidzi vakasiyana munyika dzinopfuura makumi matatu neshanu
28th yakanakisa Yunivhesiti munyika neYunivhesiti Zvinzvimbo
48th Yakanakisa Yunivhesiti munyika neQS World University Zvinzvimbo
Inopa mabhezari kune vese vanogara uye vadzidzi vekunze.
Inopa zvipo zvinoenderana nezvinodiwa.
DI ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasirese iyo inopa hukuru hwakakura hwekufunda gore rega kune vese vari mu-nyika uye International Students. Aya maScholarship anogona kupihwa zvichienderana nekukodzera uye kukwikwidza kwedzidzo, kana zvichibva pane zvinodiwa nemari.
Kupfuurirazve, mukati memakore manomwe, vadzidzi veDI vakakura kubva pavadzidzi chiuru nemazana matatu kusvika pavadzidzi vanopfuura zviuru gumi, uye chirongwa chavo chakakura kubva pazvirongwa gumi muna 7 kusvika pazvirongwa gumi nezvisere muna 1,300. Uye, vari kugadzirira kuparura yavo yekutanga Ph.D. chirongwa, icho chakatobvumidzwa nebazi redzidzo uye dzidzo yepamusoro muQatar.
DI yakavambwa muna 2015 nekuda kwekukasira kudiwa kwekuvandudzwa kwesainzi yemagariro uye vanhu muArab World. Cherechedza kuti, DI parizvino inopa chete Master's Degree.
Mari yechikoro chechiremba yeQR7,000 ($1,922.55)
Offers Scholarships uye Zvemari Rubatsiro
Vakagadzirira kuparura yavo yekutanga Ph.D. program
Chiratidzo chikuru cheVCUarts Qatar ndechekuvandudza kusimudzira kwevanhu, zvemagariro, zvehupfumi, uye zvakatipoteredza muQatar uye dunhu kuburikidza nekugadzira hunyanzvi. Uye vanoita izvi nekubatsira vadzidzi vavo kugadzira mifananidzo yakanaka kwazvo.
VCUarts Qatar ndeimwe yemayunivhesiti mashoma muQatar yevadzidzi vepasirese vanopa art-chete mapurogiramu akadai; art nhoroondo, fashoni dhizaini, graphic dhizaini, mukati dhizaini, kupenda uye printmaking, art hwaro, etc. Uyezve, VCUarts Qatar vadzidzi vanogona kusarudza kudzidza paVCU Richmond kembasi panguva yekudonha kana muchirimo semesita.
$29,409 kana QAR107048.76 pagore redzidzo; KANA $14,704.50 kana QAR53524.38 pamesita. Mimwe mari inofanirwa kubhadharwa, tinya pano kudzidza zvakawanda.
$25,956 kana QAR 94479.84 pagore redzidzo; KANA $12,978 kana QAR 47239.92 pamesita. Zvakare, iwe unogona kunyoresa muchirongwa chenguva-yenguva, uko mari yechikoro yakaderera.
302 vadzidzi vanobva kunyika makumi matatu neina
919 Alumni kubva kunyika makumi mashanu
Northwestern University ndeimwe yemayunivhesiti muQatar yevadzidzi vepasirese inosimudzira tsika dzakasiyana, uye dzinza, pamwe nekukubatsira iwe kuzadzisa chiroto chako. Icho chikoro icho vadzidzi vanogona kutora akasiyana makosi muzvidzidzo zvakawanda muhumanities nesocial science.
Zvakare, NU-Q ndeimwe yemayunivhesiti mashoma muQatar yevadzidzi vepasi rese vasingatarise mamiriro emari emhuri yako kana uchiongorora kunyorera kwako undergraduate. Uye, kune Scholarship yekubatsira vadzidzi vepasirese nemari yavo.
Vadzidzi ve110 vanobva kunyika makumi matatu nembiri dzakasiyana vanoumba Northwestern Qatar hombe kirasi yekupedza kudzidza kusvika parizvino.
NU-Q inobhadharisa dzidzo yakafanana neyeyunivhesiti yekumba campus muUnited States, dzidzo yavo $61,498 kana QAR 223,854. Kana $30,749 pamesita.
Yakaiswa 9th yakazara pakati peUS masangano neUS News uye World Report.
Inopa Inoda kubvumidzwa nebofu
Vadzidzi vanobva kunyika 32
Iyi ndeimwe yemayunivhesiti mashoma muQatar yevadzidzi vepasi rese inopa makirasi epamhepo, kusanganisira online pre-sessional Chirungu Mutauro Zvirongwa.
Vanopawo IFP (International Foundation Diploma), kwavanorera vadzidzi vasina kuzadzisa zvavanoda kuti vapinde pakudzidza kwepasikiri. Icho chirongwa che-semester maviri chinokupa iwe dhigirii redhipuroma mushure mechirongwa.
Undergraduate Degrees (BSc Hons/BEng Hons.): QAR 75,000 pagore
Ulster University International Foundation Chirongwa: QAR 75,000 chirongwa chakazara
Ulster University Postgraduate Degrees (MSc) 2-Gore P/T: 90,000 purogiramu yakazara
Ulster University MBA (Vakadzi muUtungamiri) 2-Gore P/T: QAR 120,000 chirongwa chakazara
Pre-Sessional Chirungu Chirongwa (5 modules): QAR10,000 chirongwa chakazara
Dzidzo inofanirwa kubhadharwa zvizere usati watanga chirongwa chako kana muzvikamu zvinopfuura zviviri pagore.
Yakatenderwa neBritish Council & BTEC
Kudyidzana neBEIN Media Group
Inopa nzira mbiri dzekuwana bachelor's degree; BTEC Yepamusoro National Diploma, kana BSc (Hons) Degree.
Master's Degree Scholarship yevadzidzi vakaita dhigirii ravo rekutanga kuUlster University.
Chidzidzo chinochinjika kuti chienderane nezvinodiwa nemudzidzi wese
Unogona kusarudza kudzidza chikamu chedhigirii rako kuUnited Kingdom
Nenguva isipi-ku-kuvhura musasa mutsva muLusail.
Ehe, avhareji yemari yechikoro yeYunivhesiti muQatar imadhora makumi maviri,20,000 pamesita (QAR 72,820).
Ehe, anenge ese epamusoro mayunivhesiti eQatar evadzidzi vepasi rese vanopa mabhezari kuvadzidzi vavo.
Qatar ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekufunda, kunyanya nekuti nyika dzakaita seUnited States neUnited Kingdom dzakavaka uye dzichiri kuvaka makoreji adzo epasi rese munyika. Uye, mayunivhesiti avo akaburitsa vadzidzi vanoshamisa vakaenda kumberi kuti vave vatungamiriri vakanaka muzvikamu zvakasiyana zvehupenyu.
Mayunivhesiti muHungary eVadzidzi Venyika Dzese
Mayunivhesiti epamusoro eChirungu muSpain
Mayunivhesiti muItaly Anodzidzisa muChirungu
Mayunivhesiti muSingapore kune International Students
mayunivhesiti ekudyidzana nedzimwe nyika
Mayunivhesiti muCyprus eVadzidzi Venyika Dzese
Muumbi weKunakira at Study Abroad Nations | Ona Zvimwe Zvinyorwa Zvangu
Danieri musiki wezvemukati ane makore anopfuura maviri eruzivo rwekutsvagisa nekugadzira zvirimo kubatsira vadzidzi vanoda kudzidza kunze kwenyika uye avo vari kutsvaga kutora kosi yepamhepo yekuvandudza wega, kuwana hunyanzvi kana dhigirii. Dhani akabatana neSAN muna 2 semugadziri wezvemukati wekutsvagisa.
Anoda kusangana nevanhu vatsva uye kukudziridza hukama hutsva.
Maitiro Ekutora Forensic Sayenzi Dhigirii
Maitiro Ekuwana Harvard MBA Scholarship
23 Scholarship yeMBA Kunze kwenyika
Pamusoro 15 Scholarship muUSA yeMBA
Kudzidza Kunze Kwenyika Gwara Masters Scholarship PhD Scholarships Kudzidza Abroad neScholarship Pasi Pekupedza Kudzidza Scholarship
Previous Post:Technological Innovations ye21st Century Impact the Entertainment & Gaming World
Next Post:10 Makoreji Akanakisisa eMishonga Mishonga